SHEEKADII XAASKEYGA JINNI BEY KA AHAATAY. Amal iyo xasan oo is guursadeen. Qeybtii 14aad. – Filimside.net
SHEEKADII XAASKEYGA JINNI BEY KA AHAATAY. Amal iyo xasan oo is guursadeen. Qeybtii 14aad.
Sheekada waxay noo mareysay markii ay hooyo I dhahday “waxaan kaaga cabsanayaa gabadha Jinka ah ee maalinkasta kuu timaado”
Markaaas ayaan yaabay waxaana is dhahay side hooyo arinka Amal ku ogaatay? Kadibna qof aan waxba fahamsaneen inta iska dhigay ayaan ku dhahay side ku ogaatay?
Waxay hooyo iigu jawaabtay; maalin ayaa waxaa ii imaaday naag guri raadineyso waxayna u raadineysay wiil ay dhashay oo xasan la dhaho, naagtii ayaan is barangay waxaan ana u sheegay inuu jiro wiil aan dhalay oo asna xasan la dhaho waxaan kale oo u sheegay habdhaqanka layaabka leh ee aan baryahaan dambe kugu arkay markaas ayay igu dhahday anigaa aqaano waxa haayo oo wuxuu jeclaaday gabar jin ah marka casiir ayaan u qasayaa waana kuu tilmaamayaa ee adna sii, ana waan ka ogolaaday, lkn markii aad afka galin rabtay ayaan isku naxay cabitaankiina kaa tuuray.
Markaas ayaan hooyo ku dhahay hooyo naagahaan faalka iwm adeegsado naago fiican ma ahan warkooda ka bax wiilkaaga ma waalna mana jirana wuu caafimaad qabaa ee igu kalsoonow.
Markaas ayaan hooyo dajiyay niyadana u dhisay waxaana ku qanciyay in waxaas been yihiin kadibna hooyo way iga tagtay.
Markaas ayaan kaligey gudo galay inaan fikiro maxaa dhici lahaa tolow hadii aad suntaas cabi laheyd? Markaas ayaan soo xusuustay hadalkii Amal kaasoo ahaa in alkaatuuga waxkasta awoodaan wado kastana usoo marayaan iney nakala geeyaan, waxaana dareemay in naagta hooyo u timid ay Alkaatuuga soo direen.
Anoo wali fikirayo meeshiina ka kicin ayaa waxaa ii timaaday amal markaas ayay igu dhahday “waxkasta oo dhacay waan ogahay halkaan ayaan joogay hooyo markey kula hadleysay waxa dhacayna aniga xitaa filan waa ayay igu noqdeen”
Markaas ayaan ku dhahay “lkn amal maxaa dhici lahaa hadii aan suntaas cabi lahaa?”
Waxay iigu jawaabtay “ma aqaano xasanow waxay ku xirantahay wuxuu ka sameysnaa cabitaanka waayo waxaa jiraan boqolaal wado oo ay alkaatuuga u adeegsadaan dhirta iyo qaabka ay isugu qasaanba marka waxay ku xirantahay qaabka ay iskugu qaseen iyo waxay ka sameysnaayeenba”
Markaas ayay igu dhahday aniga hada waan kaa tagayaa arooskeeniina wuu soo dhawaaday ee waxaa sameysaa kasii fikir cudurdaarkii aad qoyskaaga u sheegi laheyd mudada aad arooska ku maqantahay si aanan lagaaga shakinin, kadibna amal wey iga tagtay.
Waxaan u tagay hooyo waxaana u sheegay in qaar kamid ah asxaabteyda aan dalxiis u raaci doono isla markaasna baryo soo maqnan doono weyna iga ogolaatay.
Habeenkii markii lagaaray ayaan soo baxay waxaana soo fariistay beertii guriga anigoo ka fikiraayay Amal ayaa waxaa dhacday inaan markaan indhaha isku qabto aan amal arko lkn markaan kala qaado ma arko.
Waxaan arkay amal oo meel fog kasoo socoto lkn indhaha markaan kala qaado uma jeedo markaas ayaan gudo galay inaan khiyaalkeyga raaco oo indhihii ayaan toos isugu qabtay amalna waxay aheyd mid kis kis iigu soo dhawaato ilaa ay markii dambe horteyda soo istaagtay markaas ayaan indhaha kala furay waxaana arkay amal oo I hor taagan.
Markaas ayaan ku dhahay nolosheydii waxaan ku arkay adoo meel fog kasoo socdo,waxayna iigu jawaabtay waan ogahay xabiibii taasina waxaa sababay waa jaceylka xad-dhaafka ah ee aad ii qabto haduusan jaceylkaas jiri laheyna marnaba ima aragteen.
Markaas ayay iisoo dhawaatay waxayna iga qabatay gacanta ayadoo beerta igu soo wareejisay mar waxay iiga sheekeyneysay jaceylka ay ii qabto marna jaceylka aan u qabo ayaan uga sheekeynaayay.
Runtii amal waxay aheyd qof dagan caqli badan si fududna wax kugu fahamsiiso waxaana aad u jeclaa asluubteeda hadalka iyo habdhaqankaba oo ahaayeen kuwa aanan la iska indho tiri Karin lagana jeesan Karin waxaana intaa usii dheer qurux dabiici ah oo alle ku maneystay taasoo aanan xitaa garaneynin eray aan ku tilmaamo.
Dhoola cadeynteeda oo ka liya ayaa waxkasta ka qurux badnaayeen halka indhaheeda aadan xitaa ka jeesan Karin.
Markaas ayay igu dhahday isoo fiiri, markaas ayaan si fiican indhaha uga buuxsaday yaa allaah alla maxay quruxdii aduunka tahay, markaas ayay igu dhahday ma jiraa wax ka qurux badan dayaxa ? markaas ayaan ku dhahay; adiga ayaa waxbadan ka qurux badan.
Wey ii dhoolocadeysay markaas ayay igu dhahday; majiraa wax ka qurux badan in dayaxa guurkeena marqaati ka noqdo?
Waxaan ku dhahay; adiga waxaad raali ku tahay ayaa ana raali ka ahay.
Markaas ayay hadana igu dhahday fiiri xidigaha oo ka dooro hal xidig midkaasoo aad hadhow aqoonsan kartid.
Markaas ayaan ku dhahay; ma fuuli rabnaa xidigta?
Wey qososhay amal kadibna si kaftan ah ayay garabka jug iiga siisay waxayna igu dhahday; taasi macquul ma ahan lkn doorashadaada xidigta wuxuu astaan u noqonaa sidii aad igula soo xiriiri laheyd ma fahamtay? Ok dooro xidig kadibna magic u bixi.
Markaas ayaan xidigihii fiiriyay anigoo mid kamid ah doortay markaas ayaan inta u tilmaamay ku dhahay amal ayaan u bixiyay.
Markaas ayay igu dhahday magic aan keena aheyn u bixi. Waxaan ana ku dhahay al-marax (farxad) ayaan u bixiyay si nolosheena inta ka dhiman farxad ugu qaadano.
Markaas ayay igu dhahday; ok guurkeena kadib markasta oo aad ii baahato inaad ila soo xiriirto xidigta fiiri hana ka fikirin qofaan aniga aheyn, kadibna waxay isiisay jijin aad u qurux badan taasoo lagu xardhay luuqad aanan aqoonin gacanta bidix ayayna iigu xirtay mid lamid ah jijintaas ayay ayadana gacanteeda ku xiratay.
Markaas ayay iisoo dhawaatay ilaa ay neefteeda iyo neefteyda is qabtaan markaas ayay igu dhahday; “xabiibii indhaheyga soo fiiri” markaas ayaaan indhaheeda quruxda badan fiiriyay waxaana ay indhaheena bilaabeen iney erayo la’aan sheekeystaan.
Waxay igala hadleysay indhaheeda iyadoon hal erayna I dhihin si ay afkaarteeda ii soo gaarsiiso hadal la’aan, markaas ayay igu dhahday ok waxba nooma harin hada oo aan ka aheyn in guurka dhaco si aan xaas u noqono, erayada nikaaxana ma ahan erayo iska caadi ah oo iska dhe ah ee waa erayo loo baahanyahay inaad dareento si ay uga soo baxaan moolka dareenkaaga hadii kale erayo aan macno laheyn ayay noqonayaan.
Kadib waxay hadana I dhahday “waxaa xasanow lasoo gaaray waqtigii aan maanta sagootin laheyn barina la kulmi laheyn aniga maanta ayaan ka bilaabi adna bari ayaad ka bilaabeysaa, aniga waxaan ahay Amal gabadhii Naazik gabadhii Jinniga iyadoo uu dayaxaan marqaati yahay waxaan la duulayaa ruuxdeyda khiyaaligeyga iyo jirkkeygaba anigoo fahamsan macnaha erayadaan waxaan kula balamayaa xasan wiilkii safiya wiilkii insiga ahaa inaan markasta adeeci doono, una oofin doono, waxaana u noqon doonaa ruuxdii jirkiisa, holacii dabkiisa alifkiisa iyo ya’diisa, bilowgiisa iyo dhamaadkiisa, waxaan u ifin nolosha markii habeenku galo, waxaana u noqon hoos markii qoraxdu soo baxdo, waxaana u noqon xeeb markii badu kacdo, waxaan ka feydi kurabada una keeni farxad, waxaana u noqon mirihii ruuxda, waxaana jeclaan jaceyl aan marnaba suuli doonin, jaceyl sida kan dhulka u qabo roobka, naftadana u qabto daatadeeda, waxaan u hibeen jirkeyga ruuxdeyda markasta oo uu doono iyo si kasta oo uu u doono, ilaa iyo abid, waxaana saaray gacanteyda bidix midaada bidix tanina waa ballankeyga mana jabin doono waligiisna wuu jiri doonaa.
Markaas ayaan ana intii oo kale dhahay.
Markaas ayay iyadoo farxadii aduunka ka muuqato igu dhahday “aniga adigaa ileh ee hab isii ina shumi adiga waxaad tahay ninkeyga waxkastana waan kuu sameyni”
Lasoco qeybta 15aad oo xiiso leh.
Haddii aadan aqrisanin sheekada qaybta 12-aad fadlan RIIX HALKAAN
Haddii aadan aqrisanin sheekada qaybta 13-aad fadlan RIIX HALKAAN
Waxaa Aqrisay 546